दुई पर्यटकीय सहर पर्यटक बस सञ्जालबाट जोडिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दुई पर्यटकीय सहर पर्यटक बस सञ्जालबाट जोडिए
पोखरा, २५ असोज । दुई पर्यटकीय सहर पोखरा–तानसेन बुधबारदेखि पर्यटक बस सञ्जालबाट जोडिएका छन् । पाल्पाली समाजको पहल र तानसेन नगरपालिकाको समन्वयमा संजोग ट्राभल्स प्रालिले पर्यटक बस सुविधा दिएको हो।
पोखरा पर्यटन बसपार्कदेखि तानसेनका लागि बुधबार बिहान ८ बजे बा१प ६९० नम्बरको एसी सुविधा सहित डिलक्स बस छुटेको छ। यस्तै, ठिक सोही समयमा संजोगकै पर्यटक बस तानसेन टुँडिखेलदेखि पोखराका लागि गुड्यो।
पोखरादेखि सेवा शुभारम्भ अवसरमा प्रमुख अतिथि पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सूर्य थपलियाले सो सुविधाबाट दुई सहरबीच पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बोर्डले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
संजोग ट्राभल्सका अध्यक्ष सनतकुमार श्रेष्ठले पहिलो पटक लामाचौर–काठमाडौं पर्यटक बस सुरु गरेको स्मरण गर्दै पोखरा–पाल्पा सञ्जालले पनि दुवै सहरबीच पर्यटन प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे । करिब २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रेष्ठले संजोगमार्फत हालसम्म ३३ वटा बस चलाउँछन् । उनले पोखरा–पाल्पा बससेवा निरन्तर चलाउने प्रतिद्धता जनाए। समाजसेवी रहेका श्रेष्ठले लेखनाथको मोहरियास्थित नवज्योति सनत दुर्गा विद्यालय भवन निर्माणको लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले यातायात क्षेत्रमा राज्यको स्पष्ट नीति अभाव रहेको गुनासो गरे । उनले बस सुविधासहित थप कार्यक्रमको लागि पोखरा र तानसेनका सरोकार निकायबीच अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने बताए। नाट्टा क्षेत्रीय संघ पोखराका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले बस सेवा निरन्तरताको कामना गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको बताए।
पाल्पाली समाज पोखराका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरेले वर्षौदेखिको पाल्पालीको सपना आजदेखि पूरा भएको बताए । उनले सो कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिए।
समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार चिरञ्जीवी श्रेष्ठले समाजको अनुरोधमा संजोगले सेवा सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिए । कार्यक्रम संचालन संचारकर्मी सञ्जय मल्लले गरेका थिए । बसको पहिलो टिकट काट्ने यात्रु अम्बिका न्यौपानेलाई माला लगाई सम्मान गरियो । पोखरा र तानसेनको दुरी करिब १ सय २० किमीमात्र छ।
पाल्पा सदरमुकाम तानसेन पहाडकी रानी भनेर परिचित छ। पाल्पामा रानीमहल, ऐतिहासिक दरबार, एशियाकै ठूलो त्रिशूल, नेपालकै ठूलो ढोका छन् । पाल्पा ढाका र करुवाबाट पनि परिचित छ। यसैबीच, तानसेनदेखि पोखरा छुटेको बसको शुभारम्भ प्रदेश ५ का सांसद पूरन बज्राचार्यले गरेका छन्।